हाम्रा महान अभिवादन परम्परा
विश्वमा मान्छेले अभिवादन गर्ने विभिन्न शैली र तरिका छन् । त्यस्तै दशौं हजार वर्षदेखि सनातनी हिन्दू संस्कारमा आफूभन्दा उर्जावान, मान्यजनलाई अभिवादन गर्ने प्रचलित परम्परा र प्रकृया यस्ता छन् :
१. दुई हत्केला जोडेर नमस्कार गर्ने,
२. हातमा निधारले स्पर्श वा ढोग गर्ने,
३. शिरमा हात राखीमागेर ढोग लिने,
४. निहुरिएर हातले खुट्टाको स्पर्श गर्ने,
५. निहुरिएर खुट्टामा निधारले ढोग्ने,
६. लम्पसार परेर साष्टांङ्ग दण्डवत गर्ने ।
माथिका सबै अभिवादनले मान्यजनप्रतिको अनुजको सम्मान र अनुजप्रतिको मान्यजनको स्नेहभावनाको परम्परा कायम गर्दै लगेको हो ।
समाजमा तनाव, असहयोग, विखण्डन भनेको अन्तरनिर्भरता, आपसी सम्मान र माया, सामाजिक तथा पारिवारिक भावमा निरन्तर स्खलन जस्ता एकलबादी सोचका कारणले नै बढ्दै गएको हो । मानिस सबैभन्दा बिकसित, जटिल, परिवारबादी प्राणी हो, बिनापरिवारिक वातावरणमा उ निस्सासिन्छ । निस्सासिएको, भित्रभित्रै एक्लोपन भएको, परिवारबाट टाढिएको मान्छे अनेकौं शारिरीक, मानसिक, दिमागी र सामाजिक रोगको भकारी बन्दै जान्छ । जति आधुनिकताको कुरा गरे पनि मानिसको मन मानवजाति यो पृथ्वीमा सृष्टि भए देखि उही नै छ, मानिसमा कुनै नयाँ ईभोलुशन भएको छैन, न फिजिक्सको नियमले हुने छ ।
दशौं हजार वर्षदेखि समाजमा सद्भाव मायास्नेहको बन्धन बलियो बनाउन बिकसित गरिएका हाम्रा गुणकारी बैज्ञानिक अभिवादनका तरिका र परम्पराहरूको जगेर्ना गरिरहनुपर्छ, आफूलाई जे अभिवादन उचित लाग्छ त्यो गर्ने गर्नुपर्छ ।
मानिसको उर्जा शिरबाट प्रवेश गरेर खुट्टा र हातका औलाबाट बाहिर निकास गर्छ । त्यसैले खुट्टा वा हातमा स्पर्श गरेर अभिवादन गर्नु सबैभन्दा उत्तम बिधि हो, वैदिक विज्ञानका अनुसार !
हाम्रा नाता अनुसारका सुसंस्कारित अभिवादनका बिरूद्ध बकबक गर्ने उरन्ठेउले सामाजिक सद्भाव बिरूद्ध लागिरहने आधुनिकबादीहरूको बर्बराहटपछि कोही लाग्नु हुदैन, किनभने तिनलाई शरीरको उर्जा प्रवाह र स्पर्श विज्ञानको कखग पनि थाहा रहेको हुदैन । जे कुरा थाहा छैन, त्यसमा पनि जान्ने पल्टने कुतर्केहरूप्रति बिचरासम्म भनेर नजरअन्दाज गर्दै रहनुपर्छ । प्रमाणित लाभकारी सनातनी विज्डमको लाभ लिइरहनुपर्छ ।
हरेक मानिसमा उर्जाको परिमाण फरक–फरक हुन्छ । बढी उर्जा भएको ब्यक्तिको खुट्टा स्पर्श गर्न, त्यो पनि निधारले गर्न पाउनु अहोभाग्य हो । त्यति भएन भने हातले गोडा छुन सम्म पाए पनि भाग्य नै हो । त्यति पनि मिल्दैन भने टाढैबाट दर्शन गर्न सम्म पाउनु पनि ठूलो कुरा हो । अधिकाँश गुरूहरूले सबैलाई खुट्टा छुन पनि दिदैनन्, छुने खोज्ने मान्छे त्यसलायक पनि हुनुपर्छ । जति धेरै मान्छेले छोयो, त्यति धेरै पटक गुरूहरू आफूमा उर्जा अभिबृद्धि गर्न पुन ः पुन ः स्नान गर्ने गर्छन् । पटक–पटक स्नान गर्न पर्ने भएकोले सबैलाई छुन दिईरहनु पनि ब्यावहारिक हुदैन । तर, जसलाई छुन दिएका हुन्छन् त्यो उसको भाग्य हो भनेर बुझ्नुपर्छ। छुने अवसर पाएकाले आफूमा गुरुको उर्जा प्रवाहित भैसकेको छ भनेर महसुस गरिरहेको हुन्छ । उर्जा ग्रहण गर्न अति सम्मान गर्नुपर्ने ब्यक्ति वा गुरूको गोडा स्पर्श गर्ने मौका पाएसम्म गरिहाल्नु पर्छ ।
बाँदरे तर्कहरूको पछि लागेर आत्मघात गर्न हुदैन । बाँदरलाई नरिवलको स्वाद थाहा हुदैन ।
उपाध्याय, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।